Osimiri na coves na Mijas | Akụkọ Njem
Maria Jose Roldan | | Malaga, Osimiri
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-enwe mmasị oge ọkọchị ịbịa nwee ụsọ osimiri, isiokwu a ga-amasị gị. Enwere ọtụtụ osimiri na mba anyị na gburugburu ụwa, yana oke ohia mara mma, ma taa achoro m igwa gi ihe banyere ndi dikwa na Mijas. Ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịmata oke osimiri na ụsọ mmiri n'oge ọkọchị, n'oge oyi ma ọ bụ n'oge ọ bụla ọzọ n'afọ, ọ dịkwa mma ileta ha ma ọ bụ gaa ije iji nwee ọ enjoyụ na okike.
Mana ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịga leta Mijas ma site na ụzọ mara nke bụ osimiri ya na mma ya kachasị mma, wee gụọ akwụkwọ n'ihi na ị ga-achọpụta akụkụ ụfọdụ nke obodo a, na ha ga-achọta gị. Na ọ dịghị mkpa ka ị gaa n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa iji nwee ọ placesụ ebe ndị mara mma, Spain nwekwara ọtụtụ amara na Mujas ga-egosi gị ya.
1 Mijas: nnukwu ebe njem nleta
3 Osimiri Ọnwa
4 El Bombo osimiri
6 Osimiri Almirante
7 Doña lola osimiri
8 Oke osimiri ndị ọzọ ị na-agaghị echefu
Mijas: nnukwu ebe njem nleta
Site na afọ ole na ole gara aga rue taa, anyị nwere ike ịsị na Mijas abụrụla otu ebe kachasị mkpa njem na Andalusia. Ọ dịghị onye Andalus nke na-amaghị ebe Mijas nọ, e nwekwara ọbụna ọtụtụ ndị na-esi mba ọzọ abịa ịnụ ụtọ ụsọ mmiri ya, coves ya, gastronomy ya na ịgwọ ndị mmadụ nke ọma.
Mijas nwere ihe na-erughị kilomita 12 nke ụsọ oké osimiri ma jupụta na coves na osimiri maka ihe niile masịrị gị. ya mere ejiri m n'aka na ị ga-enwe ike ịchọta ebe zuru oke maka gị, n'agbanyeghị ihe masịrị gị ma ọ bụ mmasị gị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osimiri niile dị na Mijas nwere ọrụ ndị bụ isi iji nwee ike isoro ezinụlọ na ndị enyi nọrọ nnukwu ụbọchị.
Ọ bụrụ n’ịche n’echiche ịnụ ụtọ ezumike dịpụrụ adịpụ na Costa del Sol, mgbe ahụ ị gaghị enwe ohere ịbịaru Mijas nso ma nwee ike ịnụ ụtọ ihe niile ị na-eche gị. Echefula n'okpuru ụfọdụ n'ime mmiri na osimiri mara mma ya kachasị mma ka ị nwee ike ịme njem dị mma ma nwee ọ .ụ.
La Cala de Mijas bụ onye kachasị ewu ewu na nke kachasị na obodo ahụ na-enweta otu aha ahụ. Gburugburu ya enwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ nri n'ihi na ọ bụ ebe ndị njem nleta na-ejupụta na ndị mmadụ, na-eme ka ọ dị mma maka azụmahịa. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, etinyere osimiri dị na mpaghara a Ọchịchị Blue nke European Community ka ị nwee ike nweta echiche banyere ịma mma nke ebe ahụ na ọnọdụ dị mma nke aja ya na mmiri ya.
Osimiri a dị na Calahonda, ọ bụ osimiri dị iche na ndị ọzọ niile. Ọ nwere ọchịchịrị aja na nke ahụ ga-abụ ihe na-adọrọ uche gị ọtụtụ. Ma Ọ bụ nnukwu osimiri iji soro ezinụlọ, ndị enyi ma ọ bụ naanị nọrọ ụbọchị. O nwekwara ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ ekele maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ dịnụ iji mee ụbọchị gị n'ụsọ osimiri pụrụ iche ma ị gaghị echefu ihe ọ bụla.
El Bombo osimiri
Na Cala de Mijas ị nwekwara ike ịchọta El Bombo Beach, osimiri a ma ama n’agbanyeghi na amachaghi nke ndi ozo. O nwere ụlọ nri anọ dị n'akụkụ osimiri ma ọ bụrụ na ịchefuo akwa nhicha gị ma ọ bụ oche oche, ị nwekwara ike ịchọta ha ebe ahụ ka ị wee nwee ike ịgbazite nche anwụ ma ọ bụ oche oche ị họọrọ. Ọ bụ ụzọ nke enweghị eburu loungers na nche anwụ si n'ụlọ. Ọ bụ ezie na n’oge dị elu, ị nwere ike ịnwe nsogbu na mgbe ị rutere, a ga-ewere ihe niile ma ị ga-aga ụlọ iji nweta ya ma ọ bụ gaa ụlọ ahịa wee zụta ihe ịchọrọ maka osimiri.
Ọ bụ ụsọ osimiri ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ mgbazinye ka ị nọrọ. Ọ bụ nnukwu echiche itinye oge ọkọchị n’akụkụ osimiri ma nwee oke osimiri nso kwa ụbọchị. Ee n'ezie, Debe ya tupu oge eruo n'ihi na ụlọ ndị ahụ jupụtara n'oge dị elu, ọnụ ahịa ya nwere ike ịdị elu.
Osimiri El Almirante dịkwa na Calahonda ma ọ bụkwa ụsọ osimiri gbara ọchịchịrị. Ọ bụ ụsọ osimiri iji kpoo ikuku ọhụrụ, oke osimiri na ezigbo echiche. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-abụ ebe izu ike izu ike. Ga-enwe ọrụ iji mee ka ụbọchị gị zuo oke.
Doña lola osimiri
Osimiri a dị ka nke gara aga n'ihe gbasara ọrụ yana ọ ma ama n'etiti ndị bi n'obodo a. Maka nke a, ọ bụrụ n’ịchọrọ iru ya, ị gaghị enwe nsogbu.
Oke osimiri ndị ọzọ ị na-agaghị echefu
Ndị m gụrụ gị n’elu bụ ụsọ mmiri ndị ị na-agaghị echefu na Mijas, mana ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga njegharị mara mma na ụsọ mmiri Mijas, egbula ndepụta ndị a ka ịdee ya na njem gị. ma si otú a na-enwe oke osimiri dum. Echefula nkọwa!
Beach nke Riviera. Ọ bụ ọdụ osimiri kachasị ogologo na ụsọ oké osimiri Mijas dum.
Osimiri Cabo Rocoso. Ọ dị warara mana ọ dị mma iji soro ndị enyi nwee obi ụtọ.
Osimiri Las Doradas na Cala de Mijas
Playa del Chaparral, nke dị n’etiti Cala de Mijas na El Faro.
Osimiri El Ejido
Na Peñón del Cura
Osimiri ọ bụla m kwuru n’isiokwu a dị mma iji soro ndị ezinụlọ gị, ndị enyi ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịga naanị gị iji nwee obi ụtọ ụbọchị n’ụsọ osimiri. Mana osimiri niile nwere ezigbo ọrụ, ha sara mbara ma nwee ike ịnweta ya ka ị ghara inwe nsogbu iji ụgbọ ala gị nweta ọtụtụ n'ime ha. You marala onye n’ime ha ị chọrọ ịga kporie ndụ n’oge ọkọchị gị ma ọ bụ naanị ịmata ha na ịchọpụta mma ha niile? Ghaghi inwe ịhụnanya n’ebe onye ọ bụla n’ime ha nọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Osimiri na coves na Mijas
Ememe ndị a na-eme n’oge ochie na-atọ ụtọ n’oge ọkọchị na Spain